Apple no hanamboatra ny iPhone any India ary ireo no hamidy ao | Vaovao momba ny gadget
Ity dia iray amin'ireo lohateny lehibe avelan'ny haino aman-jery Bloomberg momba ny fanombohana ny fanamboarana ny iPhone any India. Toa taorian'ny ady maro nifanaovan'ny manampahefana tao amin'ny firenena dia nahatratra izay notadiaviny hatry ny ela ny vahoaka Cupertino. manamboatra ny iPhone ao amin'ny firenena manokana any Bangaluru.
Tsy isalasalana fa tsy mora ny nanatanterahana ny fifanarahana saingy toa efa nakaton'izy ireo avokoa ny zava-drehetra hoy ny minisitry ny haitao teknolojia ao amin'ny fanjakan'ny Karnataka, amin'ny volana aprily ho avy izao dia manomboka novokarina tao amin'ny fireneny ny fitaovam-panjakan'ny orinasa ary raha ny tokony ho izy dia andrasana mijanona ao India ny famokarana rehetra.
Amin'ny lafiny iray, Apple koa dia naneho hevitra momba azy fa tsy amin'ny fomba ofisialy, ary antenaina fa afaka ora vitsivitsy dia hanao fanambarana ofisialy izy. Ny zavatra noresahin'izy ireo hatry ny ela tao amin'ny haino aman-jery dia ny hoe niara-niasa tamin'ny manam-pahefana indianina izy ireo ary izany Nirehareha tamin'ny asa vita izy ireo teo am-piandrasana ny hipetrahany eto amin'ny firenena.
Ka azo lazaina fa efa manana ny zavatra rehetra vonona hanombohana ny famokarana izy ireo ary tamin'ny taon-dasa dia vita ny fanomanana ny orinasa Taiwanese izay hiandraikitra ny famokarana iPhone. Ny orinasa Wistron Corporation, miaraka amin'ny habetsaky ny famokarana ampy hamaly ny fangatahan'ny firenena, saingy amin'ny ankapobeny ireo fitaovana ireo dia tsy antenaina handao ny firenena. Niady mafy izy ireo mba ho ao amin'ity firenena misongadina ity ka tamin'ny farany dia nahomby ary niaraka fepetra hetra mahaliana amin'ny fanafarana singa hanamboarana ireo fitaovana ireo mandritra ny 15 taona ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Apple no hanamboatra ny iPhone any India ary any no hamidy ireo